မြေကြီးစားသူများအကြောင်း… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Money & Finance » မြေကြီးစားသူများအကြောင်း…
Posted by jaryitt on Aug 22, 2011 in Money & Finance, News, Think Tank | 17 comments
ရယ်ချင်လိုက်တာဖတ်ဖတ်မော….ရင်ဘတ်နောက်ကကျောလို့ အော်အော်ပြီးရယ်ချင်လိုက်တာ……။ နေပြည်တော် ပရ၀ဏ်ထဲမှာ ၀န်ထမ်းအချို့မြေကြီးစားနေကြတဲ့ အကြောင်းပြောပြချင်တယ်…။ ဘာကြောင့်လဲ ဘာလုပ်မလဲ လုပ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ ပြောပေးကြပါဦး…။
မြေကြီးစားသူများ ဆိုလို့ တစ်မျိုးတော့ မထင်လိုက်ပါနဲ့ဦး…။ နေပြည်တော်ရယ်လို့ စတင်ဖွဲစည်းရာမှာ မန္တလေးတိုင်းရဲ့ တောင်ဘက်အစွန်ဆုံး မြို့နယ်သုံးခုနဲ့ စတင်ဖွဲစည်းထားတာပါ..။ တောင်ဘက်ကနေ စပြောရရင် လယ်ဝေးမြို့နယ်..။ ပျဉ်းမနားမြို့နယ် နဲ့ တပ်ကုန်းမြို့နယ်တို့ ပါဝင်ပါတယ်….။ မြို့တော် တည်ဆောက်မယ်ဆိုတော့ ကြားကွက်လပ်က ကျေးရွာတွေ လယ် ယာတွေ ဟာ မြို့သစ်တည်ဆောက်ရေးထဲပါမှာပါကုန်ပါတယ်..။ ဒီသုံးမြို့နယ် အပြင် နောက်ထပ် ငါးမြို့နယ် ထပ်ပြီးဖွဲ့စည်းပါတယ်..။ ဒီတော့ ကျေးလက်မြေတွေ လယ်ယာ တွေဟာ တန်ဘိုးတွေ မြင့်တက် ကုန်တာပေါ့..။ ဒါဟာလည်း ကောင်းတယ်လက္ခဏာပါပဲ…။ မကောင်းတာက ညာဝါး ခွဲတမ်းချ အလားအလာ ရှိတဲ့နေရာတွေ သိမ်းကြုံးပြီး အောက်ဈေးနဲ့ ၇အောင် ဒီနေရာဘာဖြစ်တော့မှာ ဘယ်နေ့ဘယ်ရတော့မှာ ကောလဟာလတွေ ဖြန့် ရအောင်ဝယ် နေကြတဲ့သူတစ်ချို့ပါ..။ ဘယ်သူတွေက ၀ယ်သလဲ ပြန်ကြည့်ရင် ဒီမြေ အပေါ်မှာ စီမံ ခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ သူတွေချည့်ပါပဲ…..။ သူတို့နဲ့ ဆက်နွယ်သူတွေရဲ့ နာမယ်ပေါက်အောင်လုပ်ထားကြပြီး တန်ကြေးတက်လာတဲ့ အချိန်မှာ သိန်းဆယ်ဂဏန်းလောက်ပေးထားတဲ့ မြေကွက်တွေဟာ သိန်းရာဂဏန်း ထောင်ဂဏန်း ချီ ပြန်လည်ရောင်းချနေကြတာ မြို့ခံလူထုက လက်ပိုက်ကြည့်နေကြရတာ ..။ သူတို့မှ မတတ်နိုင်ပဲကိုး..။ သူတို့ မှ စီမံပိုင်ခွင့် မရှိတာကိုး..။
ဒီထက်ဆိုးတာပြောရဦးမယ်…။ ဇတ်လမ်းက ခုမှစတာ…..
2009 ခုနှစ်အလယ်ပိုင်းလောက်မှာပေါ့…။ နေပြည်တော် ပရ၀ဏ်ထဲမှာ လက်ရှိ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သူ တွေကို နောက်ထပ် အသစ်ဖေါ်ထုတ်မဲ့ အိမ်ယာမြေ တွေ လျှောက်ထားဖို့ ၀န်ကြီးဌာန အလိုက် ဦးစီးဌာန အလိုက် စာထွက်လာပါတယ်…။ အဲဒိပေးမဲ့ မြေကွက်တွေက စီမံကိန်းမြေပုံထဲမှာပဲ ရှိပါသေးတယ်..။ တစ်ကယ်မြေပေါ်မှာကတော့ တောတွေ ကမူတွေ ချောက်တွေ ပဲရှိပါသေးတယ်…။ ဒါပေမဲ့ မြေကွက်ရမှာပဲ ၀န်ထမ်းတွေ လျှောက်ကြပေါ့…။ ဒါပေမဲ့ စည်းကမ်းချက်တွေထဲမှာ………
၂။ နေပြည်တော် အတွင်းလုပ်သက်အနည်းဆုံး(၂)နှစ်လုပ်ပြီးသူများ
၃။ ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္မဏီ ကိုလွဲအပ် ဆောက်လုပ်စေပြီး ကျသင့်ငွေ လက်ငင်း သွင်းနိုင်သူ ဦးစားပေး
၄။ နောက်တစ်ဆင့် အရစ်ကျငွေပေးသွင်းသူများ
၅။ နောက်ဆုံးတစ်ချက်က (၅)နှစ်အတွင်း နာမယ်လွဲပြောင်းခြင်း ခွင့်မပြု…။
ကောင်းလိုက်တဲ့ စည်းကမ်းချက်တွေ…။ မြေကွက်ရပြီးရင် ငါးနှစ် အတွင်း လွဲပြောင်း ရောင်းချ ခွင့် မပြုပါဘူးတဲ့…။ ဒါပေမဲ့ ………….
ဘယ်ကနေဘယ်လို ဖြစ်ရတယ် မသိပါဘူး….။ ဘယ်နေရာမယ်ရမယ်မှန်းလည်းမသိရသေး..။ ဘယ်လောက်အကျယ်ဝန်းရမယ်ဆိုတာလည်းမသိရသေး…။ မြေတစ်ကွက် ၀ယ်ယူခွင့်ပြုသည်ဆိုတဲ့ စာရတာနဲ့ ၀န်းထမ်းကဒ်မိတ္တူ အိမ်ထောင်စုစာရင်း မိတ္တူ ပေးနိုင်ရင် အဲဒါကို ပထမ သုံးသိန်းပေးမယ် ဆိုတဲ့ အသံထွက်လာပါတယ်…။ တစ်ကယ်လည်း ၀ယ်တဲ့ပွဲစားတွေ ရှိလာတယ်..။ အဲ……..နောက်တစ်နှစ်လောက် ရောက်တော့ ငါးသိန်းအထိ ပေးလာကြတယ်..။ နောက် ခုနှစ်သိန်း အထိဖြစ်လာတယ်…။ ဘယ်သူတွေက ဘယ်လိုပေးဝယ်လာတာလဲ…။ ဒီမြေကွက်တွေကို စီမံ ပိုင်ခွင့်ရှိသူတွေကနေ ဘယ်သူမှမဖြစ်နိုင်ဘူး..။ မြို့ခံ ငွေကြေးတတ်နိုင်သူတွေ လက်ပိုက်ကြည့်နေကြရုံကလွဲပြီး ဘာမှ မတတ်နိုင်တော့ဘူး..။
ဒီတော့ ၀န်ထမ်းတွေက ဘာမှမသေချာတဲ့ မြေကွက် နေရာမှာ တစ်နေ့တာ တစ်လ စာ စားသောက်လူနေမှု စရိတ်တွေ ကိုဖြေရှင်းလိုက်ပါတော့တယ်…။ မြေကြီးတွေနဲ့ စားသောက်ရေးကိစ္စတွေ လူမှုရေးကိစ္စ တွေ အတန်အသင့်တော့ လက်ငင်းပြေလည်သွားပါရဲ့..။ နောက်လေးငါးနှစ်မှ ပြန်ရောင်းမယ်ဆိုရင် ပိုပြီး ငွေကြေး မရပေဘူးလား…..။ ဒီလို အမြီးကျက်ရင် အမြီး စား ခေါင်းကျက်ရင်ခေါင်းစား နောက်ပြဿနာနောက်မှ ၇ှင်းဆိုတဲ့ အကျင့်ဆိုးကို မသတ်သင့်ပေဘူးလား…။ ပြီးတော့ ဘယ်သူသေသေ ငတေ တို့မာနေရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ ဇွတ်အတင်း အဓမ္မ ငွေ ကြေး ဗန်းပြပြီး လုပ်ပိုင်ခွင့် အလွဲသုံးစားပြုသူတွေကိုရော ဒီအတိုင်း လက်ပိုက်ကြည့်နေလို့ ကတော့ ပျောက်ပါလိမ့်မယ်…။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုတွေ…။။ ဒါတွေဟာ နေပြည်တော် ပရ၀ဏ်ထဲမှာ ဖြစ်ပျက်နေတာပါ…။ နောက်ရှိတာလေးတွေ ဆက်ပြောပါဦးမယ်…။
ကြွေးကြော်နေရုံမျှနဲ့ ဘာမှဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူး….။ ဖယ်ရှားရမဲ့ ဆူးငြှေင့်ကို မဖယ်ရှားပဲနဲ့ ဂါထာရွတ်နေရုံနဲ့ ညှောင့်ကထွက်မသွားနိုင်ပါဘူး…။ ယတြာချေလို့လဲမရပါဘူး…။ ညှောင့်ကိုဖယ်ဖို့ ဓါတ်ရိုက်ဓါတ်ဆင် လုပ်လို့လည်းမရပါဘူး..။ ညှေင့်ကိုထွင်မှ ရမှာပါ…။ ဒါမှ ဆင်းရဲခြင်းရောဂါပျောက်မှာပါ….။
နောက်ထပ် ဖယ်ရှားရမှာတွေ တင်ပေးပါဦးမယ်…။ ခင်ဗျားတို့ကော ဘယ်လို သဘောရလဲ ပြောကြပါဦး
နောက်ထပ် ဖတ်ချင်ပါသေးတယ်…။အားပေးနေပါတယ်…..ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုရဲ့လက်တွေ့အနေနဲ့ဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာခုလိုအကျင့်ဆိုးတွေ မရှိအောင် Rules (Law) and regulations တွေလိုပါတယ်.. စီမံ ပိုင်ခွင့်ရှိသူတွေမှာ Corruptionလဲ မရှိရပါဘူးတဲ့…..။
မြေကြီးလဲစားတယ် မြေလဲခိုးတယ် မြေလဲလုတယ် မြေ အေးဓမြ တိုက်တယ် ..
ဘာသွားလုပ်ချင်လို့လဲ…ဘာမှ မလုပ်ပါနဲ့ ..အမြတ်မရှိလဲ ရပ်သာကြည့်ပေရော့…။
“””” ဖယ်ရှားရမဲ့ ဆူးငြှေင့်ကို မဖယ်ရှားပဲနဲ့ ဂါထာရွတ်နေရုံနဲ့ ညှောင့်ကထွက်မသွားနိုင်ပါဘူး…။ ယတြာချေလို့လဲမရပါဘူး…။ ညှောင့်ကိုဖယ်ဖို့ ဓါတ်ရိုက်ဓါတ်ဆင် လုပ်လို့လည်းမရပါဘူး..။ ညှေင့်ကိုထွင်မှ ရမှာပါ…။ ဒါမှ ဆင်းရဲခြင်းရောဂါပျောက်မှာပါ….။”””””
အင်း ခက်တာက သူတို့ ကိုယ်၌က ကို ရှုပ်နေတာ။အမြီးစားဖက်ခေါင်းစားဖက်ချင်းအတူတူဆိုတော့ အဝေမတည့်လို့ ဆရာငတ်မှာ၊အချင်းချင်း ထိုးကြိတ်ကြရမှာလေ။တကယ်တော့ သူတို့ က မြေကြီးတင်မဟုတ်ပါဘူး. ချီးပါ စားမှာပါ တကယ်လို့ များအရသာရှိတယ်လို့ ပြောရင် တကယ်စားပါလိမ့်မယ်
ခေါင်းစဉ်ကို ကြည့်ပြီး ဘာများပါလိမ့်လို့။ ဖတ်ပြီးတော့ မြေကြီးတောင် စားချင်စိတ်ပေါက်လာပြီ။
ဒေါ်လာစားရတာက အတက်အကျနဲ့ တလှုပ်လှုပ်ဆိုတော့ကာ…..
အတက်သေချာတဲ့ မြေကြီးက များများမြန်မြန် ဗိုက်ပြည့်တာပေ့ါ
မြေကြီးစားတြ့ သူ ကတော့ဆင်းရဲသားထဲ မပါသေးဘူး
၂၀၀၇ အိမ်မြေဈေးကွက်ပျက်ပြီး စီးပွားကပ်ဆိုက်တော့ အမေရိကားမှာ ဘယ်တော့မှမရှုံးဆိုတဲ့ အိမ်မြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေ ရှုံးလိုက်တာ ဝက်ဝက်ကွဲ၊ အခုထိ နာလန်မထူနိုင်ကြသေးဘူး..။
အဲ့ ဒါပြောတာပေါ့ –
မြေ၀ယ်မကျ ဆိုတဲ့ စကားက ( ဟုတ်လားတော့ မသိဘူး)
ဂျာရစ်တို့ကတော့ မိုက်တယ်ဟေ့ တစ်ပုဒ်ဆိုလျှင် ဆိုသလောက်ပဲ ထိထိမိမိထောက်ပြနိုင်ပါရဲ့ … ။
လူကြီးတွေ ပြောခဲ့ဘူးတယ် .. လက်ထဲက ကြက်ဥက ပို တန်ဖိုးရှိတယ် .. ခြုံထဲက ကြက်မက ကိုယ် ဖမ်းလို့ရမယ် မရဘူး ဆိုတာ မသေချာဘူး .. ဒါကြောင့် ကြက်ဥကိုပဲ ချက်စားလိုက် တဲ့ ..
အရှည်တွေးတဲ့လူက အခု ဆာနေတာမှ မဟုတ်တာ ကြက်ဥကို အကောင်ဖောက်ပါလား တဲ့ ..
တယောက်က ကြက်ဥကို မမက်နဲ့ အကျိုးအမြတ်နဲ့ တွက်ရင် ခြုံထဲက ကြက်မက ပို တန်ဖိုးရှိတယ် တဲ့ .. လမ်းခွဲတွေကတော့ အများကြီးပဲ
နောက် ငါးနှစ်ထက် အခု လတ်တလော ဗိုက်ပြဿနာက အရေးကြီးရင် ကြက်ဥ ပြုတ်စားမယ် ။
အခု ပြဿနာ မရှိရင်တော့ အကောင်ဖောက်ကြည့်မယ် .. ခဏမွေးထားရင် ဘာဖြစ်မလဲ ပေါ့
မသေချာသေးတဲ့ ငါးနှစ်အထိတော့ မစောင့်ဘူး နည်းနည်းပဲ အောင်းထားမယ် ပေါ့
စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်လူကတော့ နောင်ငါးနှစ်မှာ ဘယ်လောက် ဖြစ်လာမလဲ ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ပိုပြီးအောင်းကြည့်မယ် ပေါ့
ဒေါ်လာတွေ ဈေးကျမယ် ဆိုပြီး ၈၀၀ မှာ ရောင်းလိုက်တဲ့လူတွေ အခုလို ၇၀၀ အောက် ဆင်းသွားတော့ သူတို့ မြတ်တယ်လို့ ဆိုတယ် .. အဲဒီတုန်းက မြတ်ပြီထင်ပြီး ၀ယ်တဲ့လူတွေလဲ အခု ၁၀၀ ရှုံးနေပြီ .. သို့သော် ပြုပြင်ရေးကာလမှာ ပြန်တက်မယ်လို့ ထင်တဲ့လူတွေ ထပ်ဝယ်နေတယ် ..
အားလုံးက သူ့ပြဿနာနဲ့သူပဲလေ ..
ဟုတ်ပါ့ နေပြည်တော်က ကြက်ပျံမကျ….. ကြက်ရှောင်မရ စီကားနေပါတယ်..။ မြေကြီးပေါ် ကြက်မွေးစားသူတွေလည်း တိုက်ကြီးတွေကို ဟီးထလို့ပါဗျာ..။ ဆင်းရဲခြင်းလွတ်ကင်းအောင် … ဟော်တယ်တွေကို ထောင်…။
ဆင်းရဲ ခြင်းလွှတ်ကင်းအောင် အနိပ်ခန်းများများထောင်၊ဒါမှမဟုတ်ရင် ဒေးကလပ်တို့ နိုက်ကလပ်တို့ များများဖွင့်ပေါ့။မြေကြီးစားသူများဆိုတော့မှ ပြောစရာတွေ့ တယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပိုင်အနောက်ရိုးမထဲက မြေဧရိယ ဧကနှစ်သိန်းကျော်ကို တရုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုလွှဲအပ်လိုက်ပြန်ပီလို့ သိရပါတယ်။သစ်တောစိုက်မလို့ ပါတဲ့။ကိုယ့်မြေကိုယ်ရေ ပေါ်မှာရှင် ကျွန်မတို့ လဲ အပင်ချစ်သူတွေပါ။တကယ်စိုက်စေချင်ရင် စိုက်ကြမှာပေါ့။တရုတ်လက်ဝ ကွက်အပ်စရာမလိုပေါင်
ကိုဂျာရစ် ရေ နောက်များအဆင်ပြေရင်ပေါ့. နေပြည်တော်မှပြည်သူ့ ဥစ္စာခိုးစားသူများဆိုပြီး ကြိုးစားတင်ပေးပါဦးနော်။ဖတ်ချင်လွန်း၍မဟုတ်ပါ—ဝေမျှပေးစေလိုရင်းသက်သက်မျှသာဖြစ်ပါသည်။
ဂျွန်စတိုင်းဘက်ခ် ရဲ့ တို့ပိုင်တဲ့မြေလား ဆရာမောင်ထွန်းသူနဲ့တူရဲ့ ဘာသာပြန် တာ ဖတ်ဖူးတာလေး သွားသတိရတယ်..။ စုတ္ခ….စုတ္ခ နော်…။ အချောင်လိုချင်တဲ့ ကောင်တွေက လည်းခေတ်တိုင်းမှာရှိနေတာပဲ..။
စားတတ်ကြတာကိုး စားပါစေ စားပို့နှင်ပြီးသေမဲ့ဟာတွေ……..ဟွန်း
ခုတော့ လည်း တစ်စိမ်းတွေဖြစ်ကုန်ပြီ ဂျာရစ်ရေ…။ အရင်က ၀န်းထမ်းတွေနောက် တစ်ကောက်ကောက်လိုက်ပြီး မြေရောင်းမလားဆိုတဲ့ ကောင်တွေ…။ ဘယ်ရောက်ကုန်မှန်းတောင်မသိတော့ဘူး …..။ နီ ဆော်လိုက်လို့နဲ့တူရဲ့…။ မြေကြီးပါမစ်တွေ ပိတ်ကုန်တာ…။ ကောင်းတော့ ကောင်းပါရဲ့ ….။ တစ်ချို့က မရောင်းလိုက်ရလေခြင်းတွေ နောင်တတွေ ရလို့………